ကုန်ကြမ်း Methenolone Enanthate အမှုန့် (303-42-4) hplc≥98% | AASraw
/ ထုတ်ကုန်များ / ဟို steroids / Methenolone အမှုန့်စီးရီး / Methenolone Enanthate အမှုန့်
SKU: 303-42-4. Categories: Methenolone အမှုန့်စီးရီး, ဟို steroids
AASraw CGMP စည်းမျဉ်းများနှင့် trackable အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုစနစ်ကအောက်မှာ Methenolone Enanthate မှုန့်အစုလိုက်အပြုံလိုက်အမိန့် (303-42-4) မှဂရမ်ကနေပေါင်းစပ်နှင့်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်နှငျ့အတူရှိ၏။
Methenolone Enanthate အမှုန့်ကိုဗီဒီယို
ကုန်ကြမ်း Methenolone Enanthate အမှုန့် အခြေခံ ဇာတ်ကောင်
အမည်: Methenolone Enanthate အမှုန့်
ပွိုင့်အရည်ပျော်: 289-292 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်
စတီရွိုက်သံသရာအတွက်ကုန်ကြမ်း Methenolone Enanthate အမှုန့်သုံးစွဲမှုကို
Methenolone Enanthate အမှုန့် (CAS 303-42-4) မကြာခဏ Primonabol Depot, Primo အီး, Primo Enathate အဖြစ်ဟုခေါ်ဝေါ်ခြင်းကိုခံရခြင်းဖြစ်သည်။
Methenolone Enanthate အမှုန့် / Primonabol အသုံးပြုမှု
အများအားဆေးထိုးအသုံးပြုမှုအဖြစ်အသုံးပြု Methenolone Enanthate အမှုန့်။
အထီးအဘို့, များသောအားဖြင့်ကိုယ့်ကိုယ်အခြေအနေ 100-200mg သည်နှင့်အညီ, တစ်ပါတ် 200-300mg ယူ. , 300-400mg, 600-8 ရက်သတ္တပတ်ထက်မပိုအမျိုးသမီး, များသောအားဖြင့် 12-50mg တစ် week.And များအတွက် 100-4 ရက်သတ္တပတ်ထက်မပိုအများစု 6mg ok.At များမှာ
ကုန်ကြမ်း Methenolone Enanthate အမှုန့်
ကပျော့ Steroid တစ်မျိုးရဲ့သော်လည်း, Methenolone Enanthate (CAS 303-42-4) ၏ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအမှုန့်တို့ပါဝင်သည်နိုင်သည်
ခိုင်မာတဲ့, ဆိုးရွားသောအန်ဒရိုဂျင်တုံ့ပြန်မှု။ အန်ဒရိုဂျင်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဝက်ခြံ, အထီးပုံစံဆံပင်ကိုရိတ်ခြင်းနှင့်ခန္ဓာကိုယ်ဆံပင် growth.Acne မှ predisposed ရှိသူများအတွက်အရှိန်ဆံပင်ဆုံးရှုံးမှု, ခန္ဓာကိုယ်ဆံပင်တိုးတက်မှု၏အမျိုးမျိုးသောအစိတ်အပိုင်းများအတွက်ခံပြီး (၏အသံထွက်အမျိုးသမီးများယိုယွင်းခန္ဓာကိုယ်ဆံပင်ကြီးထွားဆံပင်အရှိန်အဟုန်မြှင့်တို့ပါဝင်သည် နက်နဲခြင်းနှင့်အစေ့များတိုးချဲ့) အတန်အသင့်ခြီးမွှောကျသွေးဖိအားအဆင့်ဆင့်, တိုးသို့မဟုတ် LDL လက်စထရောအတွက်လျော့ချရေးနဲ့တူ, သဘာဝ testosterone ဟော်မုန်းထုတ်လုပ်မှု, အသည်းစိတ်ဖိစီးမှု, အသည်းအဆိပ်၏အနိမ့်အဆင့်ကိုဖိနှိပ်။
ကုန်ကြမ်း Methenolone Enanthate ကုန်ကြမ်းအမှုန့် နောက်ထပ်ညွှန်ကြားချက်
ရောဂါကူးစက်မှုတိုက်ခိုက်နေတစ်ဦးချင်းစီအနေနဲ့ immunostimulant, ဖြုန်းအခြေအနေများ, ၏သက်ရောက်မှုတန်ပြန်ရန်တွဲဖက်: ဆေးပညာလယ်ကွင်းအတွင်း, Methenolone Enanthate ကုန်ကြမ်းအမှုန့်တစ် symptom.Other အသုံးပြုမှုတို့ပါဝင်သည်ကြွက်သားပိန်နှင့်ပြင်းထန်သောကိုယ်အလေးချိန်သောအခြေအနေများခံစားနေရပြီးတစ်ဦးချင်းစီဆက်ဆံဖို့အသုံးပြုသွားမည်ဖြစ်ပါသည် အချိန်ကြာမြင့်စွာ corticosteroid ကုထုံးနှင့်အရိုးပွရောဂါ၏ကုသမှုအဖြစ် sarcopenia (အိုမင်းဆက်နွယ်နေကြောင်းအဖြစ်ကြွက်သားများဆုံးရှုံးမှု) ။ ဒါကြောင့်လည်းနေမကောင်းသက်ရောက်မှုသို့မဟုတ်အဆိပ် [မဆိုလက္ခဏာများမပါဘဲမွေးဖွားအချိန်မတန်မီမွေးကင်းစအတွက်ကိုယ်အလေးချိန်မြှင့်တင်ရန်နိုင်ရန်အတွက်ကလေးများအဖြစ်မွေးကင်းစအတွက်အသုံးပြုသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်ကြောင်းယင်း၏အနုတ်လက္ခဏာသက်ရောက်မှုအတွက်ဒါအပျော့စားဖြစ်သက်သေပြချက်အဖြစ် Anavar ကဲ့သို့ Methenolone Enanthate ကုန်ကြမ်းအမှုန့်,3] ။ တဦးတည်းကိုအလွယ်တကူဒီဟို Steroid တစ်မျိုး၏သှေးဆောငျအားကစားနှင့်ကာယဗလအသိုင်းအဝိုင်းအတွင်းကနေကြွလာရှိရာ, ကိုယ်ခံစွမ်းအားစနစ်ကမြှင့်တင်ရန် Methenolone Enanthate ကုန်ကြမ်းအမှုန့်များ၏စွမ်းရည်ကိုလည်းနေ့စဉ်နေ့တိုင်း Steroid တစ်မျိုးအသုံးပြုသူများအတွက်အလွန်အကျိုးရှိသောနိုင်ပါတယ်တွေ့နိုင်ပါသည်။ သင့်ရဲ့ကိုယ်ခံအားစနစ်ကပိုမိုအားကောင်းဖြစ်ပါတယ်လျှင်သင်ကျန်းမာသန်စွမ်းဖြစ်နှင့်သင့်ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ရောက်ရှိဖို့တခုပိုမိုလွယ်ကူအချိန်ရှိသည်လိမ့်မယ်။
Methenolone Enanthate ရောအမှုန့် (CAS 303-42-4)
AASraw ထံမှ Methenolone Enanthate အမှုန့် (CAS 303-42-4) ဝယ်ဖို့ကဘယ်လို
AASraw ဆေးထိုး / ပါးစပ်အသုံးပြုမှုများအတွက်ကာယဗလသို့မဟုတ်မြေအောက်ဓာတ်ခွဲခန်းများမှသန့်ရှင်းစင်ကြယ် 99% Methenolone Enanthate ကုန်ကြမ်းအမှုန့်ဖြစ်သည်။
Methenolone Enanthate ရော်အမှုန့်ချက်ပြုတ်နည်း:
methenolone enanthate အမှုန့်အဘယ်သို့ပြုရပါသနည်း?
ရောင်းရန် Methenolone Enanthate အမှုန့်: သုံးစွဲဖို့4အမှုအရာ
ရောင်းရန် Methenolone Enanthate အမှုန့်: မှန်မှန်ကန်ကန် Primo သုံးစွဲဖို့4အမှုအရာ!
Methenolone Enanthate အမှုန့်ကိုဝယ်: သင်ကဤသိကြရှေ့မှာမဝယ်ကြဘူး !!!
တရုတ်နိုင်ငံတွင် methenolone enanthate အမှုန့်ပေးသွင်းသူထံမှရောင်းချရန် Methenolone enanthate
အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော 2.675ထဲက